एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री बस्नेतले यसरी फाले टेबल (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री बस्नेतले यसरी फाले टेबल (भिडियो सहित)
Poonam July 14, 2021 भिडियो, समाचार	0
कास्की । गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले सांसदले नाराबाजी लागउँदै ‘हंगामा’ मच्चाएका छन् । बजेट पारित गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरुले नाराबाजीसहित अवरोध गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यसूची अनुसार प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सदनभित्र नारावाजी गरेका थिए । होहल्ला साम्य पार्न मर्यादापालकले बल समेत प्रयोग गर्नु परेको थिइ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा बहुवर्षीय योजनाहरूलाई निरन्तरता नदिएको, अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाएका योजना कासटिएको भन्दै एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेतले संसद् भवनभित्रै रहेको टेबल उठाएर फालेका थिए ।
बेलुकी पख उदयपुर बाट आयो दुखद खबर
कालिमाटी घटनामा बस्नेतसहित ४ जना पक्राउ, युवती प्रयोग गरेर यसरी भएको थियो घटना!
दशैंमा गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसो भने कहिलेदेखि खुल्दैछ टिकट? हेर्नुहाेस्
बुटवलमा कार्यक्रम गरेर काठमाण्डौं आएका केपी ओली बालकोट नगएर किन गए सिधै शितल निवास?